१ सय २५ औं जन्मजयन्ती : माओका बिचारको बुटवलमा मन्थन-Nagarikaawaj.com
१ सय २५ औं जन्मजयन्ती : माओका बिचारको बुटवलमा मन्थन
बुटवल, पुस ११ ।
कम्युनिष्टका नेता माओत्सेतुङको १ सय २५ औं जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना मंगलबार गरी देशभर मनाईएको छ । संसारका कम्युनिष्टहरुका नेता माओको देश विदेशमा उनको जन्मजयन्ती मनाईएको छ ।
माओको स्मृतिमा बुटवलमा पनि एक कार्यक्रमको आयोजना गरी जन्मजयन्ती मनाईयो । सोही कार्यक्रममा बोल्ने कम्युनिष्ट शुभ चिन्तकहरुले माओको बिचार र उनले प्रतिपादन गरेका सिद्वान्तहरु समय सान्र्दभिक रहेको बताएका छन् । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको राज्य व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि माओका बिचारलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले कम्युनिष्टको नाममा गैर कम्युनिष्टहरु हावी हुंदै गएकाले त्यसतर्फ सचेत भएर माओले देखाएको बाटोमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सोही कार्यक्रममा माओको योगदानबारे माक्र्सवादी बिचार मञ्च नेपालका अध्यक्ष युवराज पन्थी र डा. सुरेन्द्र गिरीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वाम पन्थी नेता तथा माक्र्सवादी बिचार मञ्च नेपालका अध्यक्ष युवराज पन्थीले नेपालको सन्र्दभमा माओका बिचारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले माओका विचार र उनले प्रतिपादन गरेका सिद्वान्तहरु वैज्ञानिक भएको दावी गरेका छन् ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. सुरेन्द्र गिरीले विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उचाईमा पुराउन माओको भूमिका प्रमुख रहेकाले २१ औं सताब्दीमा पनि माओका विचार र सिद्वान्त समय सान्दर्भिक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सन्तबहादुर नेपाली, माओवादी केन्द्रका हकिकुल्ला खां, रामप्रसाद वञ्जाडे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शरद ओली, पुरुषोत्तम कंडेल, तुलसीराम शर्मा, मुकुन्द पोखरेल, झपेन्द्र जीसी, खुम वस्नेत, विनबहादुर कुंवर लगायतले बोल्दै माओका योगदानलाई उच्च रुपमा कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पुरन गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।